John Terry Oo Lagu Waayay Danbigii Cunsurinimo Ee Uu Kusoo Oogay Anton Ferdinand
John Terry ayey maxkamadii qaadeysay dacawadii cunsurinimo ku weysay wax danbi ah kadib 4 maalin oo ay socotay dacwadaas oo uu soo gudbiyay ninka difaaca uga ciyaara QPR Anton Ferdinand.
Xaakinkii maxkamada ayaa sheegay kadib markii ay dhageysteen labadii dhinac ee is haysaty in aysan muuqanin wa cunsurinimo toos ah oo uu ku kacay kabtanka Chelsea John Terry, waxa uuna ka dhaqaajiyay in wixii hada ka danbeeyaa uu fasaxanyahay xidigan, halkaana lagu soo dhameeyo wixii dacwo iyo hadalo bilihii ugu danbeeyay la isla dhex marayay.
Anton Ferdinand oo ah wiilka ka yar Rio Ferdinand oo Manchester u ciyaara ayaa mar walba ku taagnaa in ninkani ku isticmaalay ereyo fool xun oo meel ka dhac cunsuriyeysan ah, taas qasabtay in la isla soo gaaro ilaa maxkamadan si loo kala saaro ragan is haysta.
Terry ayaa dhankiisa taagnaa in marnaba uusan ku isticmaalin wax cunsuriyad ah wiilkan iyo wixii ka horeeyay intii uu noolaa, waxa uuna sheegay in isagu yahay dhibanaha meesha taagan, sababna uga dhigay sharaf ka dhac iyo waqti lumis lagu sameeyay.
Wakiiladii ama garyaqaanadii labadan xidig ayaa ku wada qancay go'aanka maxkamada welina lama hayo wax hadal ah oo kasoo baxay ragan 4ta maalmood maxkamada lagu haystay.
Terry ayaa qirtay 2 maalin kahor in Ferdinand ku qasbay inuu iska caayo ama u jawaabo, waxa ka keenayna ay ahaayeen xanaaq iyo inuu gaarsiiyay meel aanu kasoo noqon karin, osagoo kasoo qaatay ereyo qaar caay ahaa oo ku sheegay (Xaaskii Weyn Bridge kadib ma jirtaa rag kale oo saaxiibadaa ah oo aad naagahooda u dhuumatay) iyo kuwo kale oo kasii xun.
Dcawadan ay maxkamdu soo dhameysay ayaa socotay tan iyo bishii Oktobar 23 keedi sanadkii hore markii ay ciyaar ka tirsaneyd Premier League wada ciyaarayeen QPR iyo Chelsea oo ay labadan rag uga kala ciyaaraan difaaca.